Snowden oo aan xaadir ka ahayn abaalmarintii la siiyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Snowden oo aan xaadir ka ahayn abaalmarintii la siiyay
La daabacay tisdag 2 december 2014 kl 14.18
Malintii shalay ahayd oo la bixiyay biladda abaar-marinta ee Right Livelihood ayaanu goob joog ka ahayn goobtii lagu qabanayey xafladda mid ka mid ah shantii ruux ee nasiibka u yeeshay biladdaa Edward Snowden
hase yeeshee uu xafladda kaga qayb qaatay dhanka aaladda video-ga isaga oo ku sugan dalka Ruushaka oo ku haysto deggenaansho magan-gelyo ku meel-gaar ah. Snowden ayaa looga aqoon-san yahay dalka Mareeykanka oo uu u dhashay inuu ku tallaabsaday falal jaajuus-nimo, halkaasina oo uu miiska soo saaray xog ay sir ahayd oo ay lahayd hayddii nabad-sugidda mareeykanka ee uu ka howl-geli jiray iyo habkii ey ugu howl-geli jirtay dul-socodka ballaaran.
Qudbaddii uu ka jeediyay Snowden goobta xafladdu ka dhacday ayuu ugu mahad-celiyay dhammaan suxufiyiin iyo halgameyaashii u istaagey iney ku dhiiri-geliyaan howlahaa:
- Abaal-marintan ayaa dhiiri-gelinaysa dadyoow fara badan iyo howlihii ey soo qabteen tobannaankii sannadood ee ugu dambeeyey. Dadyoow gar-waaqsaday in fikradda xuquuqda bani'aadamku aanay ahayn walax cusub oo ay tahay mid horayba u soo jirtay. Inay tahay firad xoorriyadeed. Iyo in qiimaha ku kaca u dagaalanka xorriyaddaa uu yahay mid aad u sarreeya.